Njengoba kuboniswe, emsipheni sciatic - emsipheni yayifanekisela nomxhantela elikhulu umzimba womuntu, isimo esibuhlungu lihlotshaniswa ukuqhubeka sciatica. Ngakho, sciatica kungaba ukuzibonakalisa ngetindlela letehlukene: ezinye iziguli ezinzima yobuhlungu beqolo, okuyinto ngezinye izikhathi ukugxambukela ukuphila futhi ukuletha ukungakhululeki kuphelele; ezinye iziguli bahlale bekhononda yobuhlungu beqolo, futhi anaemia yezingalo nemilenze aphansi, kanti abanye baphathwa ukuluma njalo emathangeni. kuba cishe engenakwenzeka ukubikezela izilonda ezibuhlungu ukuze iziguli ozama ukuzivumelanisa khona njalo ubuhlungu futhi selashwe isifo kunalokho edabukisayo.
Iyini imbangela zesifo? Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukuvuvukala emsipheni sciatic liyafana disc herniated, kodwa izimbangela ejwayelekile ka hypothermia, ukuvuvukala emalungeni, izifo ezingosomathuba, ngifundise ngesifo sikashukela, kanye zonke ukulimala kanye nokuguliswa elihlobene ne yomgogodla.
Sidinga ukuthola izimpawu ukuvuvukala we emsipheni sciatic. Nokho, Inkomba sokuqala nesibaluleke kakhulu, okhombisa khona izifo ngenhla ubuhlungu obuhlabayo, ezahlukene ngegalelo lako nobude, linqoba endaweni lumbosacral, futhi kancane kancane saya ezinqeni, kwamathanga kwangaphakathi ke umlenze ephansi futhi unyawo sekupheleni. Kodwa kufanele kuphawulwe ukuthi ubuhlungu luyalawuleka ngokuphelele, njengoba ushintsho umthwalo ngokomzimba futhi akwazi ukuncipha kancane dengwane trajectory kusengaphambili. Ngezinye izikhathi ezinjalo ubuhlungu nje umoya futhi sikubonise kucinanise wonke umzimba, futhi ngezinye izikhathi endaweni yabo kufika babulawa esivuthayo ukuzwa ngokuyinhloko esifundeni lumbar, okuyinto ayikuvumeli futhi ahlale noma alale phansi. Sciatica kungenziwa esashiwo Ukudlikizela gqwa lapho uthephwe ku sacrum, kanye ubuhlungu obuhlabayo ephansi emuva ngenkathi ephakamisa imilenze yomibili elele.
Yesilinganiso ukucacisa isifo kunzima kakhulu, futhi lapho kudingeka eziningi laboratory-X-ray izifundo uketshezi lomgogodla, lapho phakathi exacerbation of pathologies sizoba izinga kakhudlwana izakhi cell. Lokhu kuhlaziya futhi inquma khona lesi sifo, kodwa-X-ray futhi bakwazi ukubona ngqo imbangela okubi kakhulu ezingalindelekile.
Uma kutholakala ukuthi uphethwe yini kuphakama umbuzo kanjani ukwelapha sciatica? Lo magazini kufanele sibhekiswe master nekhono, kusukela inqubo yokwelapha lithembela ngokuphelele wesifunda ukwelashwa elikhiqizayo. Lutho lapho kuyadingeka indlela olunzulu esekelwe esiteji ukuqhubeka kwesifo, nezimbangela zayo futhi izici nesineke. Esikhathini udokotela esiteji acute uncoma esiqinile embhedeni ukuphumula kanye olandelanayo ukwelashwa indlela ehlanganisa ukusetshenziswa ezihlukahlukene izidakamizwa ukuthi abonise analgesic, eqeda ukuvuvukala, zokuqeda sizole, edonsa amavithamini namaminerali eziyinkimbinkimbi nokusebenza izinkomba ezifanele ukuze athole ukwelashwa komzimba, okubandakanya yokuzijwayeza, hydrotherapy, massage. Uma ubuhlungu bengasenakubekezela, udokotela uncoma ukuqaliswa eziyinkimbinkimbi novocaine ukuvinjelwa nge dash vitamin B12 no corticosteroids. Ikhaya liyasetshenziswa utshwala isithako nomuthi ukuxoxa isifo kwemizi.
Nokho, uma ukuphathwa olandelanayo akukuniki "izithelo" yayo, kubalulekile ukuba uzindle indlela yokuhlinzwa evumela ukuqeda impande imbangela sobala eziyimbangela, okwaholela yisishiso emsipheni sciatic. Kodwa le ndlela isetshenziswa kuphela njengendlela yokugcina, lapho zonke ezinye izindlela baqiniseka engenamandla.
Ukuphromotha kweBrith kanye neBrand Domain